Sawirro - BBC Somali
Sawirro Wararka ugu waaweyn
Sawirro: Saameeyntii uu reebay weerarka Manchester
Halkan ka daawo sawirrada weerarka ay dadka ku dhinteen ee ka dhacay saaxadda lagu caweynayay ee ku taalla bartamaha magaalada Manchester
23 Maajo 2017
Sawirro: Tareen ma ku raaci lahayd 10,000 oo doolar?
Tareenka cusub ee nooca raaxada ee dalka Japan ee lagu magacaabo Shiki-shima ayaa billaabay safarkiisii ugu horreeyay isbuucan.
Sawirrada weerarka baarlamaanka ee Britain
Halkan ka daawo sawirrada laga qaaday weerarka ka dhacay dhismaha baarlamaanka Britain
22 Maarso 2017
Sawirro: Abaaraha ka taagan gobolka Soomaalida Itoobiya
Sawirada qaraxa suuq ku yaal Moqdisho
Ugu yaraan sagaal qof ayaa ku dhintay, tiro intaa kabadana way ku dhaawacmeen kadib markii gaari waxyaabaha qarxa laga soo buuxiyay uu ku dhex qarxay suuqa beerta degmada Waaberi ee magaalada Muqdisho.
26 Nofembar 2016
Sawirrada Noloshii Fidel Castro
Sawirada Fidel Castro, kacaankii la wareegay Cuba ee xukumayay ku dhowaad 50ka sano.
Sawirro arooskii ugu qaalisanaa Hindiya ee sanadka oo dhamaaday
Shan maalin kadib arooskii ugu qaalisanaa Hindiya ee sanadka ayaa dhamaaday
Sawirro: Waayihii ay soo mareen Clinton iyo Trump
Halkan ka daawo sawirrada waayihii ay soo mareen musharrixiinta madaxtinnimada Maraykanka Hillary Clinton iyo Donald Trump.
9 Nofembar 2016
Sawirada Museveni oo dib ugu laabtay beertiisa
Madaxweynaha dalka Uganda, Yoweri Museveni ayaa dib ugu laabtay beertiisa. Wuxuu sii joogi doonaa muddo isbuuc ah.
31 Oktoobar 2016
Sawirro dadka ka barakacay dagaalka Gaalkacyo
Dagaalka magaalada Gaalkacyo ka socda tan iyo 7-dii Oktobar waxaa ku barakacay sida Qaramada Midoobay ay sheegtay dad ka badan 65 kun oo qof, oo ay ku jiraan dadkii ku noolaa xeryaha dadka ka barakacay dagaaladii sokeeye ee dalka.
25 Oktoobar 2016
Sawirro: Tartanka quruxda dadka maqaarka cas ee Kenya
Sawirro: Tartanka loo qabtay dadka maqarkoodu casyahay ee Kenya
24 Oktoobar 2016
Sawirro: Tartan taallo dad ah oo ka dhacay Spain
Labadii sano mar ayaa magaalada Tarragona ee Spain ay qabataa tartan dadka ay ku tartamayaan taallo dad ka samaysan.
3 Oktoobar 2016
Sawirro: Arday Soomaali ah oo ka qeyb galay tartan hidaha iyo dhaqanka
Aadan Cabduqaadir Maxamed waa Soomaaliga kaliga ah ee wax ka barta jaamacadda Ibdan ee dalka Nigeria, wuxuu ka qeyb galay tartan dhinaca hidaha iyo dhaqanka oo loo qabtay aradada jaamacadiiisa. Sawirrada ayuuna nala wadaagay
30 Sebtembar 2016
Sawirro ku saabsan shirkii IGAD ee Muqdisho
Sawirrada shir madaxeedkii taarikhiga ahaa ee IGAD ay ku qabatay magaalada Muqdisho
14 Sebtembar 2016
Sawirro aad u qurux badan oo laga soo qaaday bilicda deegaanka iyo duurjoogta dalka Botswana
Sawirro: Muqdisho oo qaad la'aan ah
Halkan ka daawo sawirrada suuqa Beerta ee magaalda Muqdisho oo maanta qaad la'aan ah
6 Sebtembar 2016
Sawirada: dadka qaxootiga ee Sugaya in la celiyo
Dad badan oo qaxooti Soomaali ah oo sugaya in Soomaaliya la geeyo ayaa waxa ay ku xayiran yihiin xeryo ku meelgaar ah kaddib markii Jubaland ay diiday qaxootiga noqonaya.
1 Sebtembar 2016
Sawirrada indhaha soo jiitay ee Olimbiga
Qaar ka mid ah sawirrada indhaha soo jiitay ee laga qaaday Olimbiga ka bilawday magaalada Rio ee dalka Brazil
6 Agoosto 2016
Sawirro qaraxa Muqdisho
Qarax ka dhacay meel u dhow garoonka diyaaradaha ee Muqdisho ee Adan Cadde ayaa ilaa laba iyo toban ay ku dhimatay.
26 Luulyo 2016
Sawirro: Weerarka garoonka diyaaradaha ee Istanbul
Weerar is qarxin oo lagu qaaday garoonka diyaaradaha ee Istanbul ayaa waxaa ku dhintay ilaa 41 qof in ka badan 230 waa ay ku dhaawacantay.
29 Juunyo 2016
Xul BBC Soomaali waxay raadineysaa gabadha ugu gabayga fiican
Itoobiyaan loo doortay hogaaminta Hay'adda Caafimaadka Adduunka
Carruurta uu hayo xanuunka Autism-ka oo Muqdisho looga furay xarun lagu xannaaneeyo
Afar arrimood oo ku saabsan socdaalkii Trump ee Sucuudiga